Qaar ka mid ah Dukaamada Apple ee UK waxay u muuqdaan inay ku soo laabanayaan sidii caadiga ahayd | waxaan ka imid mac
Qaar ka mid ah Dukaamada Apple UK waxay u muuqdaan inay ku soo laabanayaan sidii caadiga ahayd
Bishii Maarso 2020 nolosheennu way is beddeshay oo wakhtigaas waxaa loo malaynayay inay noqon doonto arrin "yar". Si kastaba ha ahaatee, ku dhawaad ​​laba sano ka dib, waxaan weli la ildarannahay cawaaqibka fayras aan markii hore la aqoon. Waxa loogu yeero COVID-19 aad ayuu u horumaray muqaalkiisii ​​ugu horreeyay oo markii ay u muuqatay in arrimuhu si fiican u socdaan, nooc cusub oo Ómicron ah ayaa mar kale ruxay aasaaska. Waxay ku noqdeen tallaabooyinkii ugu horreeyay si ay u xaddidaan booqashooyinka ganacsiga, tusaale ahaan, oo ay ku jiraan Dukaanka Apple. Si kastaba ha ahaatee, ugu yaraan gudaha UK, waxaad mooddaa in afar bilood ka hor ay arrimuhu ku soo noqdeen.
Wixii soo socda iyo soo-socod ah ee ay masiibadani leedahay, masiibada xun ee rikoodhka ah, ma garanayno inuu warkani wanaagsan yahay, wuxuu noqon doonaa mid joogto ah ama ku meel gaar ah. Khubaro badan ayaa durba noo diyaarinaya inaan la noolaanno fayraska si aan noloshu ugu noolaanno hab baahsan. Si kastaba ha ahaatee, weli waa inaan qaadnaa tallaabooyin badan oo amniga ah oo si daacad ah u diidaya qaar badan oo naga mid ah inaan wax u qabanno sida aan runtii jeclaan lahayn. Wax iibsiga online waa mid aad u wanaagsan. laakiin in aad tagto oo aad dhadhamiso, taabato oo aad waydiiso waa wax la tabayo.
Bakhaarka Apple ayaa mar kale xaddiday booqashooyinka caabuqyada cusub awgeed iyo ballaarinta dheeraadka ah ee kala duwanaanshaha Omicron ee COVID-19. Sidaa darteed, haddii aad rabtay inaad dukaan aado si aad macluumaad uga hesho ama u iibsato, waxay ahayd inaad ballan samaysato. Boqortooyada Midowday (UK) tani mar horaba way isbedelaysaa. Apple waxa ay furaysaa dhawr ka mid ah Bakhaarradeeda Apple ee dalka oo dhan si ay macaamiisha ugu soo galaan.
Apple waxay cusboonaysiisay liiskeeda dukaannada 17 Apple Store ee UK. Taas macnaheedu waa in ay mar kale heli karaan macaamiisha ballan la'aan. In kasta oo ay jiraan wadar ahaan 38 Dukaamada Apple ee UK, Waqtigan xaadirka ah tani waxay suurtogal noqon doontaa oo keliya 17 ka mid ah. Waa run in qiyaastaas lagu fulin doono dhamaantood marka ay xaaladdu saamaxdo.
Dukaamada aan u baahnayn ballan si ay u booqdaan uu:
Jidka Bristol Cribbs
Beerta Covent London
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Qaar ka mid ah Dukaamada Apple UK waxay u muuqdaan inay ku soo laabanayaan sidii caadiga ahayd
Ka saarida Humble, Processor-yaasha Apple Silicon iyo qaar kaloo badan. Toddobaadka ugu wanaagsan waxaan ka imid Mac